Ndwendwela iBhetelehem ngelixa usenakho
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » I-Israel Iphula Iindaba » Ndwendwela iBhetelehem ngelixa usenakho
inkcubeko • Icandelo lokungenisa izihambi • I-Israel Iphula Iindaba • IPalestine Breaking News • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku
I-Israel ifuna ukuba abakhenkethi bahlale kwiihotele ezibiza kakhulu zakwa-Israeli kwaye baceba ukuyenza into engekho semthethweni ukonwabela iindleko ezisezantsi zeWest Bank kwiiBhetelehem. IJerusalem neBhetelehem ziikhilomitha ezimbalwa ukuqelelana, kwaye uninzi lwabakhenkethi lutyelela zombini ezi zixeko. Kodwa ukuba uMphathiswa Wezangaphakathi wase-Israel unendlela, kuya kuba nzima ukulala eBhetelehem njengenxalenye yalo naluphi na uhambo.
Umgaqo omtsha uya kwenza ukuba kungabikho mthethweni kubakhenkethi abaza kwa-Israyeli njengenxalenye yeqela labakhenkethi ukuba balale eWest Bank. Umyalelo, okhutshwe kwinyanga ephelileyo, ukhankanya iBhetelehem kwaye kubonakala ngathi ijolise kumaqela ohambo lobuKristu. Ayizukuchaphazela abahambi.
Ngelixa uMphathiswa Wezangaphakathi wayeqala ukukhankanya inkxalabo kwezokhuseleko, abasebenza kwezotyelelo kwa-Israeli nasePalestine bathi eli nyathelo lalenzelwe ukukhusela iihotele zase-Israeli, ezibiza kakhulu kuneehotele ezise-West Bank, ekuphulukaneni neshishini. Ekugqibeleni, emva kwesikhalazo esidlangalaleni, uMphathiswa wabeka inyathelo, kodwa abaqhubi bezokhenketho macala omabini banexhala lokuba inokuphinda ikhutshwe nangaliphi na ixesha.
IBhetelehem, neCawe yoKuzalwa kukaYesu, kunye neJeriko njengeyona dolophu indala inabemi, ibizezona ndawo zidumileyo zabahambi ngezonqulo kangangeenkulungwane. Isiphithiphithi esasikulo mmandla, ngakumbi uhlaselo lwabanqolobi kwa-Israyeli nase-West Bank, zaluchaphazela ngamandla ukhenketho. Uthotho lweengxabano phakathi kuka-Israyeli kunye ne-Islamist Hamas kwi-Gaza Strip, ngoku kutsha nje ngo-2014, kunye nothotho lokuhlaba kunye nokuhlaselwa ngo-2015 nango-2016 kugcine abakhenkethi abaninzi kude.
Kukho imiqondiso, nangona kunjalo, ukuba ukhenketho lubuyela umva. Ngo-Epreli, u-Israyeli wafumana elona nani liphezulu labakhenkethi ngenyanga, nge-394,000 yabakhenkethi abatyelele eli lizwe, ukonyuka ngeepesenti ezingama-38 ukusuka kwangexesha elifanayo kunyaka ophelileyo. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba, nokuba ngowona nyaka ubalaseleyo kwezokhenketho kwa-Israyeli, kunye neendwendwe ezizizigidi ezi-2012-ipale xa kuthelekiswa namanye amazwe akuMbindi Mpuma. I-Tunisia, umzekelo, yayine-3.5 yezigidi zabakhenkethi ngo-4.5, ngaphandle kokubulawa kwabantu ababini ababulala uninzi lwabakhenkethi kunyaka ongaphambili. Ngo-2016 baphantse babe zizigidi ezisixhenxe abatyeleli baseTunisia.
Kwakufutshane emva kokubhengezwa komyalelo owalela ukulala eBhetelehem, kwabakho umothuko ovela kubakhenkethi bamanye amazwe. Abaqhubi bezokhenketho kumacala omabini banamaqela abhukishe kakuhle kunyaka olandelayo. Iingxelo zamajelo eendaba zithi iSebe lezoKhenketho lakwa-Israyeli alikhange kuthethwe nalo.
"Lo myalelo unganefuthe elibi hayi kumaPalestina kuphela kodwa nakubanini babakhenkethi bakwa-Israeli," utshilo uSami Khoury, umongameli wangoku we-Holy Land Incoming Tour Operators Association (HLITOA uxelele i-Media Line. iwebsite visitpalestine.pa, indawo yokuhamba yomhambi ozimeleyo ofuna ukwenza amava abo eWest Bank.
Abantu basePalestine bathi ukuba iyasetyenziswa, i-odolo lakwa-Israeli linokuba nefuthe elibi.
"Ezokhenketho ligazi lokuphila kwiindawo ezininzi zasePalestine, njengeBhetelehem neJeriko," utshilo umphathi we-Green Olive tour, uFred Schlomka, uxelele I-Media Line. Ukhenketho lweGreen Olive Tours luthatha amaqela kuwo omabini ama-Israel kunye ne-West Bank ukuzama ukunika iindwendwe ukujonga omabini amacala empixano.
Amawaka abakhenkethi aya e-West Bank minyaka le, kwaye uSchlomka uthe uninzi lwabathengi bakhe banomdla wokufuna ukwazi abanomdla kwimeko yezopolitiko kunye nenkolo yommandla.
"Ndingathanda ukuya ePalestine ndiyokufumanisa okungakumbi ngembali, inzululwazi ngezinto zakudala abantu kunye namasiko abo," utshilo uNicki Spicer oneminyaka engama-52, ugqirha wosapho ovela e-United Kingdom okhe wajikeleza umhlaba, ngaphandle kwe Phakathi empuma.
USpicer woyika ukutyelela i-West Bank unoloyiko lokuba uya kwalelwa ukungena ngu-Israyeli ngokuzama nje ukutyelela le ndawo. "Ndinexhala lokuba ingaba ndingavunyelwa na ukungena ePalestine ngamasiko akwa-Israeli ukuba ndenze olo hambo," utshilo uSpicer kwiMedia Line nge-imeyile. "Ndiyazi ukuba ngekhe ndizive ndikhululeke ngendlela endiya kuziva ngayo ukuba bendicwangcisela ukuya eSpain."
Ukhenketho lweGreen Olive alukwaziswanga ngokuthe ngqo nguMphathiswa Wezangaphakathi malunga nomyalelo. USchlomka ukholelwa ekubeni isigqibo sokupapasha i-odolo, nangona kamva sasiqabile, sasinento yokwenza nezopolitiko kunokhuseleko lwabakhenkethi. "Kukuhla kuka-Israyeli kude nenkcubeko yamazwe olawulo lwentando yesininzi," utshilo uSchlomka.
Icandelo loMphathiswa Wezokhenketho ngeGunya lasePalestine linike ingxelo yokonyuka okubonakalayo kwabatyeleli ngobusuku obunye, nge-39,700 yabakhenkethi abangakumbi abachitha ubusuku kwiWest Bank kunonyaka ophelileyo.
Akukho manani aphathekayo wokuba bangaphi abakhenkethi kwaSirayeli abaya eBhetelehem ngaloo mini.
I-Israeli ilawula umda kunye ne-West Bank, isenza kube nzima kwiGunya lasePalestine ukuba lazi ukuba ngubani ongena nophuma elizweni kwaye ngayiphi injongo.
U-Khoury uthe ukutyelela ubusuku bonke kubaluleke ngakumbi kuqoqosho kunabantu abahamba imini. Amaqela amakhulu ezokhenketho aya kwenza uhambo lwesiqingatha seentsuku kwiindawo zasePalestine, ezinje ngeBhetelehem, kwaye olu tyelelo lufutshane, ngokwembono kaKhoury, alubaniki abakhenkethi ixesha elaneleyo lokuphonononga nokuchitha imali kwiindawo abazityelelayo. Ukholelwa ukuba isikhuthazo esisemva kwesibhengezo esicetywayo sasipolitiki, kodwa noqoqosho. Kubiza ixabiso eliphantsi ukuhlala eBhetelehem kunokuhlala eJerusalem, kwaye xa kukho ukhenketho lwangoku olwenzeka kwi-West Bank, u-Khoury ucinga ukuba ukwanda kokhuphiswano kunike u-Israyeli isizathu sokuthatha amanyathelo.
"(IPalestine) ngoku iyakwazi ukukhuphisana ngexabiso, inkonzo, kunye nezixhobo neehotele zase-Israeli," u-Khoury uxelele iMedia Line.
UMadison Dudley yintatheli yabafundi kunye neMedia Line